राष्ट्रिय – ZoomNP
काठमाडौं, १७ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु आपत्तिजनक भएको बतएका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाभियोग दर्ता गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण साथै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाडौं, १७ वैशाख । प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वत निलम्बित भएकी छन् । काकीलाई विभिन्न आरोपहरु लगाएर महाअभियोग दर्ता गरिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए ।
प्रधानन्यायाधिस कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड...
७ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले यसको खुलेर विरोध गरेको छ ।
एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने कदम गलत भएको दाबी गरे । ‘सरकार अधिनायकवादी शासनतिर प्रेरित भएको छ भन्ने यसले संकेत गरेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो अधिनायकवादी कदम शुशीलमाथिको मात्र हमला होइन । देशमाथिको हमला हो ।’
उनले कार्की देशभक्त न्यायधीश भएको भन्दै उनको कार्यक्षमताको सबैले कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘उहाँ सक्षम...
काठमाडौं, १७ वैशाख – सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेका छन् । कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको तथा न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको आरोप कार्कीमाथि लगाइएको छ । कस्तो छ संविधानमा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था ? संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको...
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालय सिंहदबारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि...
Breaking_News: संबिधान संशोधन बिधेयक पास गर्न नपाएर रन्थनिएको माओ-कांग्रेसद्वारा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महा अभियोग प्रस्ताव दर्ता!
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदले व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
कांग्रेस र माओवादीका एक चौथाई सांसदले आइजीपी प्रकरणको मुद्दा फैसलामा कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्।
महाअभियोग प्रस्तावसहित आइतबार दिउँसो सिंहदबार पुगेका कांग्रेस र माओवादीका सांसद अहिले सभामुखको कार्यकक्षमा छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा महान्यायाधीवक्ता...
Breaking_News: आज हराएका सांसद खोज्न सरकारले देशैभर हेलिकप्टर पठाएको ओलीले गरे खुलासा, भने -“संसद किन्न करोड-करोड कहा बाट आयो सरकार संग?”
आज अलि आकस्मिक रुपमै संसदीय दलको बैठक आयोजना गरिरहेका छौं । आकस्मिक रुपमा यस कारण बैठक आयोजना गर्नु पर्यो, संविधानको रक्षा एमालेकै काँधमा आइलागेको छ । लोकतन्त्रको रक्षा एमालेकै काँधमा आइलागेको छ । यस देशमा नैतिकता, नैतिक मुल्य मान्यता, इमान्दारिता र इमानको रक्षा र देशको सर्वाेपरि हित सबै कुरा एमालेको काँधमा छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, संबैधानिक प्रक्रियाको रक्षा र सर्बाेच्च जनप्रतिनिधि संस्था संसदको गरिमाको रक्षाको जिम्मेवारी एमालेको काँधमा छ ।
कांग्रेसको बेहाल नेपाली...
Breaking_News: प्रचण्ड-देउवालाई माले अध्यक्ष सिपि मैनालीले दिए कडा झट्का, दुइ तिहाइ नपुग्ने भएपछी मुख खोल्दै भने-“माले सरकारमा पनि जादैन र राष्ट्रघाती संशोधनको पक्षमा पनि उभिदैन”
काठमाडौँ, १७ बैशाख । जसरी पनि संविधान संशोधन पारित गर्ने अभियानमा रहेको सरकारले बिपक्षी समीकरणमा उभिएका सिपी मैनालीको नेकपा मालेलाई आफुतिर पार्ने र उनलाई सरकारमा लगेर संशोधनको पक्षमा उभ्याउने तयारी थालेको छ । यसबारे मैनाली स्वयंले भने आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय हित बिपरित हुने संशोधनका पक्षमा उभिन नसक्ने बताउँदै सरकारमा जाने कुरा निराधार भएको बताएका छन् । यो सँगै सरकारले संविधान संसोधन पारित गराउन नयाँ रणनिती थालेको देखिएको छ । प्रस्तावित संविधान संशोधनको पक्षमा दुई...
बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर ओलीले चाले कडा कदम, सांसदहरुलाई दिए यस्तो निर्देशन!
काठमाडौँ, १७ वैशाख । नेकपा (एमाले) संसदीय दलको आज बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक देश र जनताका लागि उपयुक्त नरहेको जनाउँदै त्यसविरुद्ध लाग्न आफ्ना सम्पूर्ण सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।
दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको कुरा उठेको थियो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधनको कुरा गर्ने सरकारले पुनः आफैंले संविधान संशोधनको प्रस्ताव हालेको शनिबार साँझ मात्र आफूहरुलाई...
अब बुझ्न गाह्रो परेन कहाबाट संचालित छ मधेसी मोर्चा: “कसैसँग डराएर होइन छाति ठोकेर भारतीय दुताबास जान्छौं” : राजेन्द्र महतो (भिडियो)
सद्भभाबना पार्टिका अध्यक्ष तथा आन्दोलरनरत मधेशी मोर्चाका एक शिर्ष नेता मध्येका एक राजेन्द्र महतोले इमेज च्यानलको अलगधारमा कुरा गर्दै आफ्नो माग पुरा नभए सम्म चुनाबमा भाग नलिने बताउँनु भयो ।
एक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने- सबै दलका नेताहरु भारतीय दुताबास जानहुने आफुहरु चाँहि किन नजाने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।’